M/weynaha Jubbaland oo faahfaahiyey khasaaraha weerarkii lagu qaaday Hotel Cascasey… – Hagaag.com
M/weynaha Jubbaland oo faahfaahiyey khasaaraha weerarkii lagu qaaday Hotel Cascasey…
Posted on 13 Luulyo 2019 by Admin in National // 0 Comments
Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam ayaa markii u horreeysay faahfaahin ka bixiyay khasaaraha weerarkii galinkii dambe lagu qaaday hotelka Cascasey.
Madaxweynahu wuxuu sheegay in 26 qof ay ku dhinteen weerarka halka 56 kalana ay ku dhaawacmeen isagoo sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan qaar haystay jinsiyadaha dalalka Kenyan 3 qof, Canadian 1 qof, British 1 qof, American 2 qof, Tanzanian 3 qof.
Madaxweynahu waxaa kale oo uu sheegay in labo qof oo u dhalatay waddanka Shiinaha ay kamid yihiin dadka dhaawacmay kuwaas oo hadda xaaladoodu aad u wanaagsan tahay.
Intaa kaddib wuxuu tacsi u diray qoysaska dadkii ku dhintay weerarka, isagoo si gaar ah tacsi ugu diray ehelada uu ka baxay Xildhibaan hore haddana ahaa musharrax u tartamayay xilka madaxtinimo ee Jubbaland Xildhibaan Shuuriye iyo Alle ha u Naxariistee wasiir hore oo Jubbaland ah Jaamac Fariid iyo marwadiisa Hodan Nalaaye, wuxuu Illahay uga baryay dhammaan dadka dhintay in uu janadii fardowso ka waraabiyo kuwa dhaawaca ahna wuxuu u rajeeyay caafimaad taam ah.
Madaxweynaha dowlad-gobolleedka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in raga weerarka soo qaaday ay ahayeen afar qof kuwaas oo mid kamid ah uu Hotelka isku qarxiyay mid kalana isaga oo nool ay ciidamada amaanku ay gacanta ku dhigeen halka labada kale toogasho lagu dilay.
Waxaa ku ammaanay dadaalkii ay muujiyeen ciidammada ammaanka oo dad farabadan kasoo badbaadiyay hotelka sidoo kalana ,waxaa uu intaas ku daray in ammaanka la xoojin doono , isagoo faray hay’addaha ammaanka in ay baaritaan dheeri ah ku sameeyaan sida ay wax u dheceen dibna shacabka ay ula wadaagi doonan.
Gabagabadii, wuxuu sheegay in warbixin dheerad ah oo la xiriirta sida ay wax u dheceen dhowaan ay Jubbaland soo saarayso kaddib marka hay’adaha ammaanku ay dhameeyaan baaritaanada ay wadaan taas oo la xiriirta waxyaabaha xilligan kusoo beegay falkan.